शीर्ष 10 लिंकडेन पृष्ठहरू दुबईमा काम पाउन रोजगार - क्यारियर - काम को लागी यात्रा गाइड
शीर्ष 10 लिङ्क्डिन पाना दुबईमा एक नौकरी प्राप्त गर्न
दुबईको ब्लकचेनमा सबैभन्दा राम्रो प्रमाणपत्र के हो?
17 सक्छ, 2019
शीर्ष एक्सएनयूएमएक्स लिंकडेन पृष्ठहरू दुबईमा काम पाउन, यस लेखमा, हाम्रो कम्पनीले लिked्कडिनमा अनुसरण गर्न सबै भन्दा राम्रो पृष्ठहरू राख्छ। दुबई, संयुक्त अरब अमीरातमा काम पाउन।
सामाजिक मिडिया प्लेटफार्महरू बन्छ दुबई मा एक काम खोज्ने को एक धेरै लोकप्रिय तरीका। र हामी सबैलाई थाहा छ र संयुक्त अरब इमिरेट्समा अधिक व्यक्ति लि people्कइन प्रयोग गरिरहेका छन् काम साइटहरू काम प्राप्त गर्न।
हालै यो प्लेटफर्म अपडेट गर्न को लागी प्रबंधित छ तिनीहरूको जहाँ काम मा यो सजिलो छ यदि हामी यो कम्पनी एक वर्ष पहिले तुलना। सामान्यतया बोल्दै यदि तपाईं संयुक्त अरब ईमिरेटमा एक उत्तम काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंले सुरुमा लिंक्डइनमा केही कम्पनी पृष्ठहरू अनुसरण गर्नुपर्छ।
यो निश्चित रूपमा तपाईंलाई कम से कम राम्रो भावना प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ जसले क्षणमा भर्ती गरिरहेको छनिस्सन्देह, तपाईले तल उपलब्ध गराएका कम्पनीहरूबाट तपाइँको अद्यावधिक गरिएको काम आउटलेट प्राप्त गर्नुहुनेछ।
CareerDubai.net लिङ्कडिन पेज प्रमुख स्थानीय मध्ये एक हो दुबईका क्यारियर साइटहरु। कम्पनी हेर्दै छन् जो पेशेवर प्रवासीहरु को लागी एक चाखलाग्दो प्रोफाइल छ दुबईमा कामका लागि.
क्यारियर दुबईनेट उनीहरूको आफ्नै सेवाहरू प्रस्ताव गर्न व्यवस्थापन गर्दछ खाडी क्षेत्रमा केही शीर्ष ब्रान्डहरू। जे होस्, 2004 पछि दुबई भर्ती क्षेत्र मा ध्यान केन्द्रित गर्ने कम्पनी र सामान्यतया उनीहरूलाई कसरी डेलिभर गर्ने भनेर जान्दछन् नयाँ रोजगारदाताका लागि भर्ती परिणामहरू।
यो कम्पनी को मिशन हो Expats मद्दत गर्न र स्थानीय ग्राहकहरू स्रोतबाट र युएईमा सबैभन्दा योग्य पेशेवरहरू भाडामा लिन्छन्।
बोएन हेडिन एक हो स्टाफिंग र मुंबई बाट संगठन भर्ती, महारस्त्र र लिंक्डिनमा 250,039 भन्दा बढी अनुयायीहरू छन्। त्यसो भए यो कम्पनी सामाजिक रूपले प्रभावशाली छ। यो कम्पनी भर्ती अपरेसन चलाउँदै दुनिया भर बाट पेशेवरहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो सम्भव समाधान प्रदान गर्न।
Boyen Haddin सँग काम गर्दछ भारत र दुबईमा सबै भन्दा राम्रो कम्पनीहरू। त्यसो भए यस कम्पनीले प्रदान गरेको रोजगारका अवसरहरू सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा छन्। फर्म विशेषज्ञता दुबई मा वरिष्ठ-स्तर कार्यकारी खोज मा। यसबाहेक, यस कम्पनीको साथ, तपाईं बोर्ड परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ रोजगार अवसर र निर्देशक स्थिति, साथ साथै नेतृत्व विकास वरिष्ठ व्यवस्थापन स्थिति।
कम्पनी विशेषता फोकस र मध्य पूर्व बजारमा जोखिम अत्यधिक परिचालित छ। जहाँसम्म, यदि तपाईं बोएन हेडिन कम्पनीको साथ एक अत्यधिक कुशल पेशेवर प्रबन्धक हुनुहुन्छ भने तपाईले रोजगारदाताहरूलाई तपाईंलाई अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।
एमिरेट्स एयरलाइन्स / विमानन
दुबईमा आधारित एमिरेट्स कम्पनी। यद्यपि पूर्ण कम्पनीको नाम एमिरेट्स समूह हो। र कम्पनीले 103,363 भन्दा बढी राष्ट्रियताबाट 160 कर्मचारीहरू काम गर्दछ। त्यो प्रभावशाली भन्दा बढी हो। अपडेटेड रोजगार पोस्ट गर्ने कम्पनीले लिंक्डिन पृष्ठमा प्राय: प्रस्ताव गर्दछ। त्यसोभए, निश्चित रूपमा लि for्कडिनमा पालना गर्नु उचित छ।
एमिरेट्स समूहको विस्तृत एचआर टीम भएको। तिनीहरू विश्व भर बाट भर्ती छन्। र उही तरीकामा, कम्पनी विविध भारतका अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेदवारहरू, दक्षिण अफ्रिका र अमेरिकाबाट पनि
अमीरातका सम्पूर्ण समूह पोर्टफोलियोमा अमीरातको संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल समावेश छ। अनि निस्सन्देह, सबैका रोजगारी प्रस्तावहरू लिङ्कडिनमा वा उनीहरूको प्रोफाईल वेबसाइटमा समूहको समर्पित क्यारियर वेबसाइटको माध्यमबाट अन्वेषण गर्न सकिन्छ। emirates.com/careers
दुबई एयरपोर्ट लिंक्डिन पृष्ठ हो दुबई मा एक रोजगार प्राप्त गर्न को लागी अनुसरण गर्न अर्को स्मार्ट विचार। कम्पनीले स्वामित्व राख्दछ र धेरै व्यापार विभागहरूको प्रबन्ध गर्दछ। उदाहरण को लागी दुबई इन्टरनेशनल (DXB) को अपरेशन र विकास।
र पक्कै दुबई इन्टरनेसनल (DXB) संसारको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट हो। तिनीहरू वास्तवमै हुन् हजारौं कर्मचारी कामदार। जहाँसम्म, तिनीहरूको लिंक्डइन प्रोफाइल पृष्ठ अनुसरण गर्दा तपाईंलाई अरू धेरै कामहरूको बारेमा सूचित गरिनेछ साथै उदाहरणका लागि दुबई वर्ल्ड सेन्ट्रल (DWC)। - विश्वको भविष्य हब।
खैर, दुबई एयरपोर्टहरू कर्मचारीहरु कडा मेहनत गर्न आवश्यक छ ग्राहकहरु को लागी एक विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान गर्न। त्यसो भए, यस कम्पनी द्वारा प्रदान गरिएको रोजगारहरूaहुन सक्छ पालेवा कल सेन्टर ग्राहक सेवा प्रबन्धक। र तपाइँका कर्तव्यहरू सुरक्षित हुन र एयरपोर्टको एक प्रभावशाली भाग ठीक चलेको छ भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि हुनेछन्।
Majid Al Futtaim होल्डिङ
यो कम्पनी पुरानो व्यवसाय होतथापि, सुपर छिटो बढ्छ। फर्मको स्थापना 1992 मा माजिद अल फुटाइमको नामबाट भएको थियो। त्यस पछि एक बन्न प्रख्यात संगठन मध्य पूर्व हो.
तपाइँ अग्रणी शपिंग मल्ल जस्ता काम पाउन सक्नुहुन्छ, मानव संसाधन मा समुदाय र नीति अन्तर्गत सञ्चालन गर्दछ। यसका साथै, खुद्रा विभागमा काम गर्नुहोस् र प्रबन्ध गर्नुहोस् मध्य पूर्व भर को विश्राम केन्द्रहरु, अफ्रीका र एशिया। दुबईमा यस संस्थाको साथ धेरै ठाउँ छ।
इमा रियल एस्टेट
इमारको साथ रोजगारहरू दुबई जीवनशैलीको विकासको प्रकार हो। कम्पनी 1997 मा स्थापित भएको थियो। र दुबई र अबु धाबीमा क्यारियरका अवसरहरू धेरै क्षेत्रहरूमा खोलिएका छन्। उदाहरणका लागि एक आतिथ्य, दुबई र अबु धाबी शपिंग मल्लहरू। यसबाहेक, तपाईंसँग व्यावसायिक लीजिंग व्यवसायको साथसाथै मनोरञ्जन, र दुबईमा सम्पत्ति विकास रोजगार।
लि्कडिन र 563,914 मा कम्पनीका 20 भन्दा बढी अनुयायीहरू छन् अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासीहरूको लागि उपलब्ध रोजगार। तपाईं जुन चाहिँ तपाईंको पेसा निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले नयाँ भविष्य ईमार रियल इस्टेटको साथ निर्माण गर्नुहोस्।
एक्सपो 2020 दुबईमा
दुबईमा एक्सपो 2020 को लागि तपाईंले आधिकारिक लिंक्डइन च्यानल पनि अनुसरण गर्नुपर्छ। संयुक्त अरब अमीरातमा सरकार यस च्यानलमा सँधै नयाँ रोजगार प्रस्तावहरू थप्दै। त्यसो भए, एक्स्पोको पालना गर्नुहोस् किनकि तपाईं मध्य एक्ने व्यवस्थापक वा वरिष्ठ व्यवस्थापकको रूपमा यस क्षेत्रमा विश्व एक्सपो ल्याउन सक्षम हुनुहुनेछ।
एक्सपो शीर्ष लिक्डिन पृष्ठ शीर्ष 10 लिंक्डिन हो दुबई वा अबु धाबीमा रोजगार पाउन पृष्ठहरू। त्यसोभए, सामान्यतया बोल्दै तपाईले यस परियोजनाका लागि आवेदन समाप्त गर्नु अघि विचार गर्नुपर्नेछ।
इमर हस्पिटलिटी समूह
Emaar आतिथ्य समूह को एक हो युएईमा बहिर्गमनका लागि अग्रणी रोजगारदाताहरू। यो व्यवसाय Emaar Properties PJSC को पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनी हो। लिंक्डिनमा उनीहरूको उपस्थिति एक मानक तरीका जस्तै छ। यद्यपि यो संगठन एक भित्र रहेको छ दुबई मा संसारको सबैभन्दा मूल्यवान रियल इस्टेट विकास कम्पनीहरु.
दुर्भाग्यवस, Emaar संग काम प्राप्त गर्दै तपाइँको पक्ष बाट प्रमाणित दक्षता संग दर्साउन सम्पत्ती व्यवसाय मा। र उहि समयमा, तपाईंसँग शपिंग मल्ल र खुद्रा बजार वा आतिथ्य र मनोरञ्जनको ब्यबश्थापन हुनुपर्छ। त्यसले निश्चित रूपमा संयुक्त अरब एमिरेट्समा अन्तर्वार्ता लिन मद्दत गर्दछ बुद्धि ईमर एचआर प्रबन्धक।
Emaar आतिथ्य समूह को विस्तार र दुनिया भर बाट हजारौं विदेशीहरु काममा ल्याईएको छ। र यसको भर्ती आवश्यकताहरू अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उम्मेद्वारहरूको लागि बढ्दो छ। त्यसोभए, यदि तपाईं एक कुशल कामदारको रूपमा काम पाउन खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईंले युरोपमा पहिलो विकल्पको रूपमा गन्तव्य रोज्नु पर्छ। अर्कोतर्फ, मध्य पूर्व व्यवस्थापकहरूको लागि हो र भारत वरिष्ठ निर्देशकहरूको भूमिकाहरू जस्तै निर्देशकहरू र सीएफओको लागि। यद्यपि इमार आतिथ्य समूह अब एक्सपो एक्सएनयूएमएक्स दुबईको आधिकारिक होटल र आतिथ्य पार्टनर हो।
ADNOC समूह कम्पनी अबू धाबी मा 1971 मा स्थापित भएको थियो। तिनीहरू पनि लिंक्डिनमा पहिलो कम्पनी बन्न। यो संगठन हो एक राष्ट्रिय तेल कम्पनीको रूपमा काम गर्दै। एक राम्रो लिंक्डइन पृष्ठ एक ईन्जिनियरको रूपमा अनुसरण गर्न वा यदि तपाईंसँग प्राविधिक विभाग जस्ता सीपहरू छन् भने।
ADNOC एक हो मध्य पूर्वमा विश्वका अग्रणी उर्जा उत्पादकहरू। प्रबन्धकहरू कुवेत र साउदी अरेबिया र क्यानडा र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट पनि काम गर्दै। कम्पनी यसको 45 वर्ष पुरानो हो। र ईतिहास, ADNOC वर्षौंदेखि स्थिर रूपमा बढेको छ। र कि कम्पनी को प्रतिष्ठा यसको परिचालन भन्दा बढी विस्तार हो.
यो संगठनले तेल र ग्यास क्षेत्रमा 18 कम्पनीहरू र सहायकहरूलाई भन्दा बढी बनाइरहेको छ। त्यसो भए, यदि तपाईं मध्य पूर्वमा क्यारियर खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाइँले निश्चितको लागि ADNOC अनुसरण गर्नुपर्छ। उत्तम तरिका लिked्कडिनमा खाता सिर्जना गर्नु र तिनीहरूको अद्यावधिकहरू पालना गर्नु हो दुबईमा एक एकीकृत तेल र ग्यास रोजगारीका लागि। अन्वेषण र उत्पादन, शोधन, पेट्रो रसायन र वितरणको लागि ह्यासट्यागहरू पनि थप्नुहोस्।
अबु धाबीबाट सबै भन्दा राम्रो एयरलाइन्स / उड्डयन कम्पनी। यकीनको लागि यो कम्पनी हो विश्वभरि चर्चित। इतिहाद एयरवेज सरकार अन्तर्गत एक व्यवसाय संचालित हो संयुक्त अरब एमिरेट्स कानून र नीतिहरू.
Expats र साथ साथै स्थानीय रोजगार खोजी गर्नेहरूलाई स्वागत छ संयुक्त अरब एमिरेट्सको राष्ट्रिय एयरलाइनका लागि आवेदन दिनुहोस्। एतिहाद लगभग हरेक दिन भाडामा लिइरहेका छन्। तपाईं ग्राहक सेवा मा र एक उडान विभाग मा एक काम प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक, यस कम्पनीको पनि ईन्जिनियरिंग विभाग र कार्यालय विभाग मा धेरै पदहरू छन्।
कम्पनी आयो एक धेरै लामो मार्ग भन्दा पहिले एक उत्तम अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको रूपमा खडा छ। तिनीहरू यात्राको सुरुदेखि नै राम्रो लड्न। र सामान्यतया बोल्दै, कम्पनी 2003 मा शुरू भयो। त्यसबेलादेखि महान उपलब्धिहरू गर्न सफल भयो। अर्को राम्रो बिन्दु यो छ कि प्रबन्धकहरु दिनभरि लाखौं यात्रुहरु संग विश्वव्यापी साहसिक साझेदारी गर्न सक्षम भएकोमा खुशी छन्। र निश्चित रूपमा त्यस्ता प्रतिस्पर्धी विभागहरूमा कामबाट सन्तुष्टि प्राप्त गर्नुहोस्।
निष्कर्ष - शीर्ष 10 लिङ्क्डिन पाना दुबईमा एक नौकरी प्राप्त गर्न
त्यसो भए, हाम्रो शीर्ष 10 लिंकडिन पृष्ठहरू अनुसरण गरेर दुबई मा रोजगार प्राप्त गर्न। उत्तर हो हो, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको केवल कम्पनी पृष्ठहरूमा क्लिक गर्नुहोस् र अनुसरण गर्नुहोस्। जब यी संगठनहरूले रोजगार प्रस्ताव पोस्ट गर्दैछन् तपाईंलाई तपाईंको लिंक्डडिन प्रोफाइलमा सूचित गरिनेछ। साथै, स्मार्ट तरिका केवल एक ह्यासट्याग पछ्याउन र तिनीहरूको थप्न हो दुबईमा भर्ती र भर्ती.
Linkedin हो रोजगारी खोज्नेहरूका लागि उत्तम प्लेटफर्म मध्ये एक। त्यो सत्य हो, त्यसैले तपाईंले कामको खोजी उद्देश्यको लागि तपाईंको सामाजिक मिडिया प्रोफाइल प्रयोग गर्ने बारे विचार गर्नुपर्छ। र यदि हामी संयुक्त अरब एमिरेट्सको बारेमा कुरा गर्दैछौं भने। Linkedin हाम्रो देश मा सुपर लोकप्रिय छ। त्यसो भए यो दिमागमा राखेर, हामी तपाईलाई दुबई र अबु धाबीमा सम्भावित रोजगार खोज्दैछौं.
दुबई शहर कम्पनी अब दुबई मा रोजगार को लागी राम्रो गाइड प्रदान गर्दछ। हाम्रो टोलीले हाम्रो लागि प्रत्येक भाषाको जानकारी थप्न निर्णय गर्यो दुबईको मार्गदर्शकहरूमा रोजगार। त्यसो भए यस कुरालाई ध्यानमा राखेर तपाई अब गाईड, सुझाव र रोजगार प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ संयुक्त अरब एमिरेट्स तपाईंको आफ्नै भाषाको साथ।